Shine Construction Co., Ltd | iMyanmarHouse.com
Shine Construction Co., Ltd
We built our reputation on prompt,quality professional service to our customers.
ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/shine-construction
တင်ထားပြီးသော အရောင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်
တင်ထားပြီးသော အငှါးကြော်ငြာ အရေအတွက်
ဆောက်လုပ်ထားပြီးသော ပရော့ဂျက် အရေအတွက်
တင်ထားပြီးသော စုစုပေါင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်
တင်ထားသော အငှားကြော်ငြာများ မရှိသေးပါ။
တင်ထားသော အရောင်းကြော်ငြာများ မရှိသေးပါ။
Shine Construction Co., Ltd မှ ဆောက်လုပ်သော Project များ
Golden Parami Luxurious Condominium
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလှကို ခံစားနိုင်မယ့် Golden Parami Condominium ရန်ကုန်မြို့ထဲက ကွန်ဒို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် လှိုင်မြို့နယ် ၊ အောင်ဓမ္မရိပ်သာလမ်းနဲ့ ပါရမီလမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ Golden Parami Luxurious Condominium နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂရန်မြေအမျိုးအစားပေါ်မှာ...
Asia Pacific Tower ကို Shine Construction မွB.E.H.S (No.1) Dagon,Gyo Phyu Road , Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon တွင်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Building – Tower (1) For My Home My Office Tower (2) for Residential and each two elevators Third Floor is Shopping Mall. Room Area Min (1585.8) sqft ~ Max (2699.55) sqft Room Type Shrine and Living Room Master Bed Room Double Bed Room Bath& W/C Kitchen & Dinning Room. Facilities Mat+Strip Foundation Ready-Mixed Concrete Elevator4Nos (24 Hours) Own Meter Transformer Generator Overhead Tank Underground Tank Swimming...
Shwe Htan Pin Condominium
BCC ကျပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သော Shwe Htan Pin Condominium ရန်ကုန်မြို့ ရှိကွန်ဒိုများစွာထဲမှ အသင့်နေထိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သော အဆင့်မြင့်မြင့် နေထိုင်ချင်သူများအတွက် အမှတ် (၂၃) ၊ ထန်းတပင် ကျောင်းလမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် Shine Construction မှ ဆောက်လုပ် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်သော Shwe...
No.(29),Ground Floor, Gyo Phyu Condo, Gyo Phyu Street, Minglar Taung Nyunt, Township, Yangon.
မိတ်ဆွေ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို အသေးစိတ် သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Shine Construction Co., Ltd ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်